Fanondranana henomby any ivelany : abatoara telo nakatona vonjimaika | NewsMada
Fanondranana henomby any ivelany : abatoara telo nakatona vonjimaika
Anisan’ny nampiakatra ny vidin’ny henomby eto an-toerana sy nampirongatra ny halatr’omby ny fanondranana azy any ivelany. Nakatona vonjimaika ireo abatoara tantanan’ny vahiny misehatra amin’izany, saingy azo antoka fa tsy tena hahavaha ny olana.
Nankatoavin’ny filankevitry ny governemanta, ny talata 23 jolay teo, ny fanakatonana vonjimaika ireo abatoara sady manondrana henomby any ivelany. Voakasik’izany ny orinasa tantanan’ny Doli food (Dago trade teo aloha) eny Vontovorona sy ny Madagascar business group (MBG) eny Ambanintsena, samy eto Antananarivo, miampy ny Golden Bull any Ihosy.
Noraisin’ny fanjakana ity fanapahan-kevitra ity satria tsikaritra nandritra ny fanaraha-maso ifotony nataon’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana, sy ny fitarainana nataon’ireo mpamatsy sy mpiompy omby, fa tsy nanaja ny fenitra ireo orinasa vahiny telo ireo. Ao anatin’izany ny saham-bilona hisakafoan’ny omby sy ny toerana mialoha ny hamonoana azy. Voatery naaton’ny fanjakana, araka izany, ny asan’ireo orinasa ireo, manondrana henomby any ivelany.
Nampidangana ny vidin-kenomby
Tsiahivina fa anisan’ny nampidangana ny vidin’ny henomby (10.000 Ar-12.000 Ar ny kilao) ny fihenan’ny tolotra eny amin’ny tsena. Anisan’ny mety nahatonga izany ny fanondranana any ivelany, sy ny firongatry ny halatr’omby.
Miteraka resabe tokoa mikasika ity fanondranana sakafo any ivelany ity tato ho ato. Toy ny katsaka sy ny siramamy ary ny saribao. Zavatra ilaina andavanandro avokoa ireo voalaza ireo, ary miantraika amin’ny vidiny eto an-toerana ny fanondranana ampahany betsaka any ivelany. Tsy voakasik’izany kosa ny harena an-kibon’ny tany, nefa misy ny firenen-kafa manafatra ny vokatra tsy voahodina, saingy mandrara ny azy tsy haondrana any ivelany fa tsy maintsy ahodina. Anisan’izany ny any Tailandy.